Tompon-tsoratr'i Water Liu Yunsheng | Famoronana an-tserasera
Watercolor dia iray amin'ireo taranja ao anatin'ny sary hosodoko sarotra kokoa ny mahafehy. Marina fa io no iray amin'ireo voalohany izay atrehin'ny olona aorian'ny fandalinana ny mainty sy fotsy amin'ny alàlan'ny arina na pensilihazo, fa raha te hampiseho fahaiza-manao tena tsara dia mila fahaizana kely sy fanazaran-tena an-taonany maro.
Izy io dia i Liu Yunsheng, ilay eo am-pelatanany teknika ampy mba hanehoana amintsika fa avy amin'ny watercolor dia azo atao ny mahazo valiny tena akaiky ny atao hoe hyperrealism, araka ny aseho amin'ity sanganasa famoronana manaitra ity izay nandaniany ny zavakanto sy ny asany tsara rehetra.
Raha sahirana kely ny loko rano dia satria mampiasa rano be loatra izy io mahay manao gradients ary manolotra fanavahana manokana izay tsy azon'ny akrilika na ny menaka amin'ny fomba mitovy. Ny fandalovana rano ao anaty loko rano dia mety hidika fa tsy maintsy mamakivaky ilay olana isika mba hamoronana vokany hafa amin'ny gradient, raha manomboka manandrana maka tahaka izay nataon'i Yunsheng isika, dia mety ho lasa korontana ihany fa tsy ny endrik'io zazavavy io ka olombelona amin'ny fijeriny sy ny fihetsiny.
Izany no antony niderantsika ny fanomezana lehibe an'ity artista ity izay mampiseho amintsika ny fomba mitandrina be ny antsipiriany. Izany dia mitondra antsika amin'i Yunsheng izay mahafoy tena amin'ny tarehy ankizy, vehivavy ary ny be antitra ary mametraka ny fanamarihana amin'ny hoditra, izay aseho tsara amin'ity asa zarainay avy amin'ireo andalana ireo.
Afaka nahita kely an'ity mpanakanto ity aho, ankoatra an'io Facebook izay ahitantsika ny ampahany amin'ny sangan'asany sy ny fahaizany mana-pahaizana momba ny loko water. Teraka tamin'ny faramparan'ny taona 1950 dia nomena tamin'ny fotoana tsy fahita firy ho an'ny lokon'ny rano, ka raha tsara vintana ianao afaka miditra amin'ny fampirantiana iray dia aza hadino ny fotoana.
Mpanoratra nandao antsika vao haingana ary manolotra fifehezana ao amin'ny loko rano dia Steve Hanks.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sariitatra saika tena misy i Liu Yunsheng